Semalt: Ukubaluleka kokuKhuphela zonke iIkheli ze-IP zangaphandle
Uhlobo lomntu ukuphambuka. Yingakho kubonakala ukuba ezinye izinto kufuneka zenziwe ngokukhawuleza kunokuba zihambe emva koko, ziyahlulwa. Ngamanye amazwi, ukulungiswa kwexesha kusoloko kunqoba. Ukungafani nazo zonke iilwimi ze-IP zangaphandle kubaluleke ngakumbi xa zijongene nebhulogi yokuqalisa okanye iwebhusayithi - silber uhr herren. Ukuba unqwenela inkqubo epholileyo kwaye efanelekileyo, oko akufanele kunganakwa. Konke okufanayo, kunamabhanki amabini. Okokuqala, le mijelo yezithuthi ibona idatha ebalulekileyo njengenani leembono zekhasi kunye nexesha elichithwe kwiphepha lewebhu. Okwesibini, iyanciphisa izinga lokunciphisa xa kukhulisa ukuphindaphindiweyo kwee-surfers (abasebenzisi).
Njengoko abalawuli bewebhu basebenzisa le datha ukuhlalutya kunye nokuphucula, kukho isidingo sokuba ungavumeli idilesi yakho ye-IP. Nantoni na into echasene nale nto ichaza idilesi kumandla akho okubamba ingqiqo ebalulekileyo-ukusuka kwi-analytics.
Nasi isikhokelo sikaFrank Abagnale, umphathi we-Semalt weMphathi weNtuthuko yoMthengi, ngendlela yokukhupha idilesi ye-IP kwi-Google Analytics.
Isinyathelo sokuqala: qaphela idilesi yakho ye-IP
Le nyathelo yinto ecacileyo, kwaye iGoogle inokukunceda. Yenza nje uthayiphe Iyiphi idilesi yam ye-IP. Imizuzwana imiba iya kubonakala, kwaye phezulu kwimiba, uza kubona IP
Inyathelo lesibini: yiya kwiifayile
Kule nto kufuneka wenze oku okulandelayo:
Yiya kwi-Google Analytics uze ungene kwi-akhawunti yakho. Emva kokuba ungene ngemvume, kufuneka ukwazi ukufumana ikhaya le-Akhawunti.
nqakraza kwi-'Art 'ithenda kwindawo ethile phezulu kwimenyu yokuhamba. Oku kuya kukuthumela kwesinye isikrini
emva kwesinyathelo esasentla, khetha i-akhawunti apho idibansi yakho ihlala khona
khetha kwaye ukhethe idibansi (ipropati) ongathanda ukuyikhuphela ngaphandle kwingxelo yakho ye-analytics.
khetha enye yeetable ezifakwe kwiifayile ezifakwe kwisihlomelo uze udale enye (yongeza ihluzi elitsha).
Isinyathelo sesithathu: ukusebenzisa irayiliti
Ukucinga ukuba awukwenziwanga oku ngaphambili uze uqaphele oku kulandelayo:
yakha icebo elitsha kwiprofayili
cinga ngokucacileyo kodwa kulula ukuyikhumbula igama lokucoca. Zama into efana ne-IPs evimbileyo
khetha icebo elilungiselelwe ngaphambili uze uqhubekele kwisinyathelo esilandelayo
wenze utshintsho kwimenyu yesibini ehlayo efana nokuthi 'isithuthi kwidilesi ye-IP.'
ukhiye kwidilesi yakho ye-IP njengoko ufumene njengoko kuboniswe ekuqaleni kwesi sikhokelo.
gcina utshintsho, kwaye ulungile ukuya
Yiyo elula. Ngoku ukuba uzinyamekele oku, unelungelo lokungena kwiwebhusayithi yakho ngaphandle kokukhathazeka malunga nantoni na ukuphazamisa ingxelo yakho ye-Analytics / idatha. Kuthiwani ngokulula kwakho? Amaxabiso okungabandakanyi idilesi ye-IP kwi-Google Analytics ilula kwaye ayifuni ukuba ube ngumbutho wezobuchwepheshe. Mane ulandele amanyathelo adweliswe, kwaye wenze:
Isinyathelo esinye - vumela i-Google ikuncede ukuba ubone i-IP yakho ekhethekileyo
Inyathelo lesibini - uhamba nge menu ye-akhawunti uze wenze i-filter
Isinyathelo esithathu - hlela ikhefu yesiko ukuze ungabandakanyi i-IP yakho kwaye ulondoloze zonke iinguqulelo.